Ø Jabhada wadaniga xoreeynta Ogaadeenya oo Itoobiya ku eedeeysay in ay huriso dagaalada dadka shacbka ah.
Ø Arday u dhashay Ogadenya oo Jaamcad ka dhiganayay Wadanka Suudaan oo ciidamada gumaysiga Itoobiya ku xidheen magaalada Jigjiga.
Ø Kolonzo Musyoka oo soo saaray go,aankii kama danbaysta ahaa ee tirada ka qeyb galayaasha shirka.
Ø Ciidammada Itoobiya oo lagu eedeeyay xasuuq ay gaysteen gobolka Gambella.
Ø Itoobiya oo diiday inay bixiso kharashkii xallinta khilaafka xuduudda iyo suugaan halgameed.
Jabhada wadaniga xoreeynta Ogaadeenya oo Itoobiya ku eedeeysay in ay huriso dagaalada dadka shacbka ah.
War-saxaafadeed uu soo saaray hogaanka Warfaafinta ee JWXO ayaa ku eedeeyay taliska TPLF ee talada wadanka itoobiya haya inuu ka danbeeyo hurinta dagaalada qabiiliga ah ee si isdaba joog ah uga dhex dhaca dadka deriska iyo walaalaha ah ee kunool Ogadenya.
Xukuumada itoobiya ayaad aad ugu dadaasha siday iskaga horkeeni lahayd una abuuri lahayd colaadaha qabiilada iyo qowmiyadaha kala duwan ee gumaysiga itoobiya ku hoos jira.iyadoo doonaysa inay dagaaladaas qabaliga ah kaga mashquuliso shucuubta xaqooda u halgamaya oo ay kow ka yihiin shacbiga soomaalida ogadenya,
War-saxaafadeedka ururku wuxuu uga digay shacabka ree ogadenya inaysan ku dagmin dibindaabyadaas uu gumaysigu maleegayo,wuxuuna ku adkeeyay inay sii xoojiyaan halkanka xaqqa ah ee JWXO ay hogaaminayso.
Arday u dhashay Ogadenya oo Jaamcad ka dhiganayay Wadanka Suudaan oo ciidamada gumaysiga Itoobiya ku xidheen magaalada Jigjiga
wariyaha Wakaaladda Wararka Ogadenya u fadhiya magaalada Khartuum ee dalka Suudaan, ayaa noosoo tabiyey in xabsiga magaalada Jigjiga loo taxaabay arday soomaalida Ogadenya ah oo wax ka baranayay jaamacad ku taala dalka Suudaan, kaasoo fasax u tegay dalka Ogadenya.
Waxay wararku intaas ku darayaan in ardaygaas lagu hayo xabsi aan lagu soo booqan karin, ilaa iyo haddana aan la garanaynin sababta loo xidhay, balse la sheegay in lagu eedaynayo inuu hawlo siyaasadeed ku lug-lahaa.
Caado ayay u tahay in ciidammada gumaysiga Itoobiya ay xabsiga u taxaabaan ama dilaanba dadka aqoonta leh ee soomaalida Ogadenya u dhashay, iyagoo dadwaynaha soomaalida Ogadenya ka ilaaliya inay wax bartaan ama in dadka wax soo bartay ay u faa’iideeyaan.
Itoobiya oo diiday inay bixiso kharashkii xallinta khilaafka xuduudda.
Xalinta khilaafka soohdinta ee Itoobiya iyo Eritrea oo wakhtigeedii dheeraaday ayaa waxaa gabaabsi noqday kharashkii loogu talagalay, sidaasna waxaa sheegay xoghayaha guud ee qaramada midoobay Mr. Koofi Annan mar uu warbixin u jeedinayay Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay.
Wuxuu kaloo warku intaa raaciyay in qaybtii lacagtaas ee lagu dhigay dawlada Ertrea ay bixisay, hase yeeshee dawlada Itoobiya ay joojisay inay lacagtaas bixiso.
Wuxuu kaloo MR. Koofi Annan warbixintiisaas ku soo daray inay dalalka deeqda bixiya ku deeqeen 10 malyun oo Dollar, walina loo baahan yahay lacag gaadhaysa 4 Malyuun oo Dollar, wuxuuna Itoobiya ugu baaqay inay si degdeg ah u bixiso lacagta laga sugayo.
Madaxwaynihii Kililka Gambella oo baxsaday.
Wariyaha Wakaaladda Wararka Ogadenya u jooga magaalada Addis Ababa ayaa sheegaya inaan ilaa iyo hada la haynin madaxwaynihii Kililka Gambellada Okelo Akuai, darawalkiisii iyo laba ilaaliyayaashiisa ka mid ah oo baxsaday horaantii Todobaadkan.
Warku wuxuu intaa ku daray in la filayo inuu Mr. Okelo u baxsaday wadanka Sudaan balse aan ilaa hada lahaynin halka uu ubaxsaday oo dhab ah, waxayna baxsashadiisu ka danbaysay markii ay ciimada Itoobiya xasuuqeen qabiilka uu ka dhashay Mr. Okelo ee Anuak.
Mr. Okelo wuxuu sheegay in tirada dadka halkaas lagu laayay ay aad uga badan tahay tirada ay dawladu sheegtay. Ilo muhiim ah ayaa sheegaya in dadka halkaas lagu xasuuqay ay kor u dhaafayso 400 oo qof.
Xasuuqan waxa dawlada Itoobiya si wayn ugu canbaaraysay hay’ad caalami ah oo u-kuurgasha arrimaha xasuuqa oo la yidhaahdo(Genocid Watch), taasoo fadhigeedu yahay magaalada Hague ee wadanka Holland.
Dhinaca kale wararka naga soo gaadhaya kililka Gambellada ayaa sheegaya inay ka qaxeen dad gaadhaya ilaa iyo 1600 oo qof oo ka tirsan qabiilka Anuak(Anyuwak), kuwaasoo ka qaxay cabsida ay ka qabaan in xukuumada Meles Zenawi ay mar kale xasuuq u gaysato.
Ciidammada Itoobiya oo lagu eedeeyay xasuuq ay gaysteen gobolka Gambella.
Golaha Xuquuqda Bani’aadamka ee Itoobiya ayaa xukumadda Addis Ababa ku eedeeyay in ciidammadeedu ay ka qayb qaateen xasuuq loo gaystay qaar ka mid ah qabilooyinka ku dhaqan gobolka Gambeella.
Madaxwaynaha Golaha Xuquuqda Bani’aadamka ee Itoobiya Barfasoor Mesfin Wolde-Mariam ayaa sheegay in ciidammada Itoobiya ay si buuxda uga qayb qaateen weerarro loo gaystay qaar ka mid ah qabiilooyinka dega gobolka Gambella, waxayna ciidammada xukuumaddu weerarradan kaga aar-goosanayeen dilkii loo gaystay qaar ka mid ah shaqaalaha Qaramada Midoobey oo gobolkaas lagu laayay.
Xukuumadda ayaa dhimashada ku sheegtay 57 qof oo kaliya, hase yeeshee Golaha Xuquuqda Bani’aadamka ee Itoobiya ayaa daboolka ka qaaday inuu hayo magacyada 93 qof oo afartii toddobaad ee ugu denbeeyay halkaas lagu dilay.
Barfasoor Mesfin wuxuu xukuumadda Melse Zenawi ku eedeeyay inay dejisatay siyaasad cad oo ka dhigan inay iska hor-imaadyo iyo dagaallo ka dhex abuurto qabiilooyinka kala duwan ee wada-dega, gaar ahaan kuwa dega koonfurta galbeed ee Itoobiya.
Xukuumadda Itoobiya waxay sidoo kale dagaallo sokeeye oo joogto ah ka dhex abuurtaa beelaha kala duwan ee ku dhaqan waddanka Ogadenya, taasoo ay uga dan-leedahay inay kaga mashquuliso halganka xornimo doonka ah ee ay kula jiraan.
Kolonzo Musyoka oo shalay soo saaray go,aankii kama danbaysta ahaa ee tirada ka qeyb galayaasha shirka.
Wasiirka arimaha dibada ee Wadanka Kenya Mr. Kolonzo Musyoka ayaa si cad ugu dhawaaqay go,aanka kama dambaysta ah oo ay si wada jir ah ugaadheen IGAD iyo besha caalamku,go,aankaas ayaa ku sargooyey 42 qof ka qaybgalayaasha shirka wadatashiga ee ka soconaya safari park Hotel –Nairobi,wasiirku wuxuu si aan leex-leexad kujirin u gaadhsiiyey go,aankaas hogaamiyayaasha soomaaliyeed,isagoo ku wergeliyey cidaan raali ka ahayn go,aankaasi ee doonaysa inay shirka ka baxdo in diyaar loola yahay in soomaaliya lagu celiyo sida ugu dhakhsaha badan,go,aan kan cad ayaa shiki weyn ku abuuray kooxda SRRC ee gacansaarka laleh dowlada Itoobiya,oo doodoodu ahayd inaan ka qaybgalayaasha tiradooda laga badanin 24kii saxiixe iyo Madaxweynaha DKMG Dr.Cabdiqasim Salaad Xasan waxayna ukala jabeen 2 kooxood,iyadoo weliba qaar kamid ah hogaamiyayaashii ugu diidma adkaa ay dabacsanaan muujiyeen.